Ọnọdụ ọhụrụ na azụmaahịa kọmputa | ECommerce ozi ọma
Ọnọdụ ọhụrụ na e-azụmahịa
Ọ gaghị abụ ihe ijuanya na ụlọ ahịa brik ma ọ bụrụ na e-commerce otu ụbọchị na-ebu ntu n'ime ili. E-azụmahịa bụ naanị ọdịnihu maka azụmahịa na ndị mmadụ na-eji ya. Kwa afọ, na-enwe mmetụta dị ukwuu nke azụmahịa e-commerce nwere na ọnọdụ uche nke ndị mmadụ, ndị ọchụnta ego na-agba mbọ ịmata ọdịiche dị n'etiti nyiwe e-commerce ha site na ịnabata usoro teknụzụ na azụmaahịa. N'ime afọ ndị gara aga, anyị hụrụ mmụba dị ịrịba ama na ụzọ ịkwụ ụgwọ nke oge a, nke ezubere iji nye ndị na-azụ ahịa ịdị mfe nke ịlele "na mgbata".
Omume a na-adabere na digitization na echiche siri ike. Ma enwere nnukwu ntọala nke ndị ọchụnta ego, ndị ka na-arụ ọrụ na ntanetị ma nwee olile anya ịbawanye atụmanya ahịa ha.
Ugbu a, ịrụ ọrụ na ntanetị adịghị nsogbu, ezigbo nsogbu bụ ịnweta ohere ahịa bara uru. Ya mere, e-commerce abụghị naanị ebe ọzọ ego si enweta; e-commerce, na oge ugbu a, bụ isi iyi nke ego maka azụmahịa ọ bụla. N'ihi mmasị na-eto eto maka ịzụ ahịa n'ịntanetị, ọ dị oke mkpa maka ndị ọchụnta ego ịchụso ngwa ngwa e-commerce iji mee ka azụmahịa ha na-agba ọsọ, ọbụlagodi na ọnọdụ autopilot.
1 8 nddị nke ga-emetụta
2 Shoppingzụ ahịa ahịa
3 Nzụta iwu olu
4 Azụmahịa mmadụ ga-abụ ụzọ a ga-esi aga
5 Crypto na mmiri
6 Nhazi nke onwe dika usoro atumatu
7 Okwu ịkpachara anya
8 Mara ihe ha choro tupu ha eme
8 nddị nke ga-emetụta
Ajụjụ na oge ndị a abụghị otu esi esi azụmaahịa dị n'ịntanetị gaa na nke na-anọghị n'ịntanetị, ajụjụ bụ, otu esi agbaso usoro ịntanetị na ọganihu site na ya. Ọ bụ ezie na a na-ahụta azụmahịa e-commerce dị ka mmiri ara ehi nke azụmahịa, ndị egwuregwu na-enwekwa ọkaibe na-ebugharị ahịa na-agafe oke.
Ọ bụrụ na enwere otu ihe doro anya site na ọnọdụ ndị a hụrụ na 2019, ọ bụ na azụmahịa e-abụghị abụ ma ọ bụ ihe na-agafe agafe. Are nọ ebe a iji nọrọ na-emetụta azụmahịa nke echi, ọ bụ ya mere ị ga-eji zụlite ngwa ahịa e-commerce ozugbo enwere ike iji nweta akụkụ mbụ nke ihe ịga nke ọma. Ọ bụrụ na ị ka nọ na ngere gbasara usoro ọdịnihu nke azụmahịa e-commerce ga-abụ nke eserese, lee usoro ị kwesịrị ịnabata "ugbu a" maka kandụl na ahịa na-enweghị ntụpọ na 2020.
Nbunye ga-adị ngwa, ọsọsọ, ọsọ ọsọ. N'oge na-adịbeghị anya, ndị na-azụ ahịa maara nke ọma oge ọ na-ewe iji nweta ngwaahịa ha. Tụkwasị na nke ahụ, enweghị ndidi ha, na ndị ọchụnta ego e-commerce ga-enwe nrụgide n'ezie iji wepụta nnyefe "ozigbo".
Agbanyeghị na oge ọ na-ewe iji nweta ngwa ngwa na-edobe ọtụtụ mgbanwe, dịka oge ịtụ ahịa, ebe nchekwa, ebe ndị ahịa, ngwaahịa na ngwa ahịa na nnyefe ikpeazụ, ndị ọchụnta ego ga-eji ikike nke teknụzụ wee kwalite ha. nnyefe ngwanrọ na kilomita ikpeazụ iji nweta nnyefe ọsọ ọsọ dịka ha nwere ike.
Shoppingzụ ahịa ahịa
N'oge na-adịbeghị anya, ndị ahịa niile na-achọ bụ mma. Ya mere, enwere mgbanwe doro anya na ụzọ ndị na-azụ ahịa na-ahọrọ igosipụta omume ịzụ ahịa ha. Ọ bụ ezie na afọ iri gara aga ahụla mkpawanyewanye weebụsaịtị, ọ bụ ngwa mkpanaka nke na-ekpebi omume ịzụ ahịa n'ọdịnihu nke ndị na-azụ ahịa.
Ngwa ngwa ngwa na-adịwanye mfe, nke na-adọta nnukwu ndị na-ege ntị ka ha na ha na-emekọrịta ihe ma na -emepụta atụmanya ahịa dị ukwuu maka ndị ọchụnta ego. Na mgbakwunye na nke a, weebụsaịtị nwere mmachi na-eji nwayọọ nwayọọ merie site na ngwa mkpanaka na oke mma.
Yabụ, ọ bụrụ na ị na-achọ weebụsaịtị iji bido njem dijitalụ gị ma nweta ọganii e-commerce, ịkwesịrị ịwụ elu gaa na ngwa mkpanaka iji nweta nsonaazụ azụmaahịa gị chọrọ.
Nzụta iwu olu
Kpọọ ya Alexa, Ok Google, ma ọ bụ Siri, ọbịbịa nke teknụzụ iwu olu na-eji nwayọọ nwayọọ abanye n'okporo e-azụmahịa iji gosipụta atụmatụ dị mma maka ndị na-azụ ahịa.
N'afọ gara aga enwere mmụba na ojiji nke iwu olu maka ịzụrụ; agbanyeghị, na 2020 a ga-enwe nnabata dị ịrịba ama nke teknụzụ iwu olu, nke ga-eme ka ọ dị mkpa maka ndị ọchụnta ego ịgbakwunye teknụzụ a na ngwa azụmaahịa e-commerce ha.
Nke a bụ obere ọnọdụ dị mkpa nke iwu na-arịwanye elu nke iwu olu. N'ọdịnihu, site na mmụba na-arịwanye elu nke nnabata ngwaọrụ enyemaka, chefuo banyere ekwentị, ndị na-enyere olu a ga-abụ ezigbo ndị ọchịchị, ndị ga-ekpebi ire ahịa azụmaahịa e-commerce gị.
Azụmahịa mmadụ ga-abụ ụzọ a ga-esi aga
Dika data bu ezi ihe omuma nke ecommerce weebụsaịtị, data anaputara site na ojiji ndi mmadu na-aru oru ndi mmadu ga-anọgide na-arụ ọrụ dị mkpa. Ka ọ dị ugbu a, Instagram na - enweta traction dị ka ngwa ngwa ngwa ngwa e-commerce. Enweghi ike ileghara onyinye Facebook na e-commerce ahịa.
Na mgbakwunye na e-azụmahịa, elekọta mmadụ media na-eje ozi na-emetụta ịzụ omume, ma ọ bụ kama impulsive ịzụ omume nke ndị na-azụ ahịa. N'ọdịnihu, azụmahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma ọ bụ mmalite nke mgbasa ozi mmekọrịta dị ka isi okwu ntanetị ga-abụ ihe dị mkpa nye ndị ọchụnta ego.
Ijikọ ndị enyi na ịtụnye aro ihe dị jụụ ịzụta ma nwaa ga-abụ atụmatụ bụ isi nke ndị ọchụnta ego kwesịrị ịtụle itinye na ngwa ecommerce ha.
Crypto na mmiri
Site na ego na nnyefe, na ichekwa ego na bank, kaadị akwụmụgwọ, kaadị debit na obere akpa, ụzọ ndị na-azụ ahịa na-akwụ ụgwọ maka ihe ha zụrụ adịlarị mfe - ma ọ bụ, dịka ha na-ekwu, abụrụla usoro ndenye ego otu aka.
Taa, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ na-adabere na obere akpa eletrọniki na akaụntụ PayPal iji kwụọ ụgwọ, nke na-egosi ngbanwe site na ụdị ịkwụ ụgwọ ego nke akwụkwọ na usoro ịkwụ ụgwọ dijitalụ. Na 2020, omume iji obere akpa eletrọniki ga-enweta ike dị oke mkpa; Agbanyeghị, ụfọdụ ndị dike e-commerce ga-emekwa mgbanwe iji nabata ọdịnihu nke ụdị ịkwụ ụgwọ: nkewa crypto.
Agbanyeghị na cryptocurrency agaghị abụ usoro miri emi mana na 2020, ọ ga-emerịrị akara ngosi ma gosipụta onwe ya dị ka usoro ịkwụ ụgwọ.
Amamịghe echiche na eziokwu gbara ọkpụrụkpụ iji were nweta ahụmịhe ndị ahịa na ọkwa ọzọ
Na ngwụsị nke ụbọchị, e mepụtara nyiwe e-commerce iji mee ka ndị ahịa nweta ọkwa ọhụrụ. Ọ bụrụ na enwere otu ihe dị iche na ụlọ ahịa anụ ahụ site na ọnụ ụzọ azụmaahịa dị n'ịntanetị, ọ bụ mmetụ aka ma chee na ndị ahịa nwere ike ịnweta.
Kaosiladị, ngwa e-commerce anaghị enweta ahụmịhe a, nke na-enweta ala site na ụlọ ahịa brik na ngwa agha. Na 2020, ngwa ngwa e-commerce ga-enwe mgbanwe na mmetụ nke ọgụgụ isi na eziokwu dịwanye elu.
Ndị ahịa ga-enwe ike itinye foto ha na ngwa ekwentị e-commerce ma nweta echiche nke ụdị uwe ha, etemeete ma ọ bụ ngwa ha ga-adị na ahụ ha. Ahụmịhe dị otu a ga - eme ka ndị ahịa nwekwuo mmasị na ngwa ekwentị na e-commerce. "
Nhazi nke onwe dika usoro atumatu
Ọ bụ ezie na ebe nrụọrụ weebụ e-commerce na ngwa ngwa mkpanaka nke afọ ise gara aga agaghị enye ihe ọ bụla karịa ahụmịhe ịzụ ahịa na ndị ahịa, enwere nnukwu ọgba aghara na mpaghara e-commerce, ebe ndị ọchụnta ego azụmaahịa na-amata ndị ahịa ha nke ọma.
Ya mere, kama ndị ahịa na-aga na ngwa mkpanaka ma ọ bụ weebụsaịtị yana ihe ha chọrọ, ndị ọchụnta ego nwere ọgụgụ isi na-eme azụmahịa na onyinye, dabere na ozi anakọtara site n'aka ndị na-eri ihe n'ụdị data igwe mmadụ dịka afọ, okike, ọnọdụ, ibu, ogo, nhọrọ, Nsonaazụ ọchụchọ, nzụta ndị gara aga, wdg.
Nhazi nke Ecommerce, n'aka nke ya, na-eje ozi dị ka atụmatụ ahịa dị mkpa maka ndị ọchụnta ego, na-achọ ịkwalite ahịa ha ma melite njigide ndị ahịa. Nhazi nke onwe na-enye abamuru abuo ọzọ maka uzo ahia e-commerce banyere ire ahia bawanye ma na-eme ka uche nke ndi ahia bia site na enyemaka nke nkwuputa okwu iji hu na ahia di nma niru.
Ndenye aha e-commerce bụ mgbakwunye ọhụrụ
Have nwetụla mgbe ị na-eche ihe na-eme ngwa ngwa ngwa ecommerce dị iche na ụlọ ahịa brik na ngwa agha? Ọ bụ mma nke onyinye na ego nke usoro ntanetị ndị a ga-enye.
Ọnụ ala nke ọrụ, nke na-ewetu oke azụmaahịa azụmaahịa, na-enye onye ọchụnta ego na e-commerce uru iji nweta uru, ọbụlagodi na-enweghị ịpịpụta ụfọdụ ụgwọ ọrụ. N'aka nke ọzọ, ụlọ nkwakọba brik na ngwa agha ugbua na-ata ahụhụ site na oke ọkụ sitere na ala, ike, ndị ọrụ, wdg.
Agbanyeghị na azụmahịa na mwepu ego ga-abụ ihe eji eme ngwa ngwa ngwa ngwa, 2020 ga-ahụkwa mmụba nke ịzụrụ ndenye aha maka ndị na-azụ otu ngwaahịa ahụ kwa mgbe. Omume a ga - abụ nnukwu ọrụ na ire nri ụmụaka, ọgwụ, wdg.
Okwu ịkpachara anya
Ọ bụ ezie na usoro ịzụ ahịa e-commerce na-aga n'ihu na-abawanye ma melite ohere ịzụ ahịa maka ndị ọchụnta ego, ọ dị mkpa ka ndị ọchụnta ego ghọta akara ngosi akara ala nke nwere ike imetụta ma ọ bụ bụrụ ihe kpatara ịda mba.
Ọ bụrụ na enwere otu ihe ị ga-ewepụ na azụmaahịa azụmaahịa, echiche niile gbasara azụmahịa ga-abụ ihe achọrọ. Ihe ahụ bụ data. Ọ bụrụ na ndị ọchụnta ego jiri data ahụ n'ụzọ ziri ezi, a ga-emesiwanye mgbasawanye azụmaahịa ha. Mana ọ bụrụ na ejiri data dị ka ụzọ anyaukwu iji wakpo ebe ndị ahịa na-ewere nzuzo ha n'eleghị anya, otu data ahụ nwere ike ibibi azụmahịa nke e-commerce. Okwu ị na-achọ bụ - GDPR.
Ihe dị mkpa nke GDPR dị elu na mpaghara ndị mepere emepe dịka Europe, North America, agbanyeghị na ọ na-enwekwa ọganiihu na mpaghara na-emepe emepe dị ka Asia Pacific na Latin America. Nke a pụtara na ndị ọchụnta ego ga-agbasi mbọ ike iji nweta nke a.
Mgbe ha nyochachara ihe ndị dị ike iji gbanwee ihu ụzọ e-commerce, ọ dị oke mkpa na ndị ọchụnta ego ghọtara usoro mbụ na nke ọzọ ha ga - eme iji mee ka akara ha na - aga n'ihu.
Ọ bụrụ na ị bụrụlarị onye na-eme egwuregwu ecommerce, ịkwesighi ịga ogologo dị ukwuu iji mee omume a. Ihe niile ị ga - eme bụ ịkpọ ndị ọrụ raara onwe ha nye nke ndị na - emepe emepe na ndị na - emepe emepe akwụkwọ ozi wee kọwaa ụdị omume ịchọrọ ịhụ na ntanetị ecommerce gị.
Agbanyeghị, ọ dị mkpa ka ịme nke a ozugbo enwere ike n'ihi na afọ 2020 abụghị nke dị anya ma ohere ahịa na-aga n'ihu. Kenye ego dị iche maka mgbasa ozi gị, nke ị ga-eme maka 2020.
Agbanyeghị, ezigbo njem ga-amalite ma ọ bụrụ na ịnweghị ọnụnọ n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ e-commerce dịla ochie, ị nwere ike ịgbanwe ozugbo iji mepee ngwa mkpanaka e-commerce iji were azụmahịa gị gaa n'ọzọ ọzọ.
Nzọụkwụ mbụ n'ịzụlite ngwa mkpanaka e-commerce bụ iji mezuo ihe achọrọ na atụmatụ ndị dị mkpa ịchọrọ na Portal e-commerce gị. Ọ dị gị n'aka ma ị ga-achọ ngwa dị elu ma ọ bụ nke mkpanaka maka ịnwale ma jiri nwayọ gbanwee gaa na nsụgharị dị elu mgbe ị chere na ị chọrọ atụmatụ.
N'aka nke ọzọ, ịnwekwara ike ịmalite site na ụdị nke ngwa ahụ yana ijikọ ụfọdụ atụmatụ akọwapụtara nke ọma ka ị wee nwee ike iji uru ahịa na-aga nke ọma na e-azụmahịa na 2020.
Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịga na obere akpa ma ọ bụ tinye ego na ntanetị iji nye ndị ahịa gị ohere ịhọrọ ụdị ịkwụ ụgwọ. Tụkwasị na nke a, ị nwekwara ike ịdabere na usoro nbanye nke mgbasa ozi mmekọrịta iji wepụ data dị oké mkpa site na ndị ahịa gị iji nye ha ahụmịhe nkeonwe.
N'ọdịnihu, ka ị na-ahụ azụmahịa gị rutere n'ọnọdụ dị oke egwu, ị nwere ike ilekwasị anya na atụmatụ ndị dị elu. Agbanyeghị, ịmepụta ngwa eji arụ ọrụ nwere ogo dị elu ga - enyere gị aka ịnwale ihe omume igwe mmadụ gị, ọkachasị mgbe ịmalitere azụmaahịa ịntanetị.
Ọ dị mkpa na ị jikọọ ahịa gị na akaụntụ mgbasa ozi gị. Ọ bụrụ na ndị ahịa gị nwere ike ịchọta ngwaahịa gị na netwọkụ mmekọrịta ha mana ha ga-ahapụ peeji ahụ iji zụta ha, ị mepụtala esemokwu: usoro ndị ọzọ ha na-eme, obere ohere ịtụgharị. Ọ bụ otu ihe ahụ kpatara na ebe nrụọrụ weebụ emeghị nke ọma na-ahụ ọnụọgụ ego dị elu na ọnụego mgbanwe dị ala.
Site na mbenata esemokwu na ikwe ka ndị ahịa gafere ma ọ bụ pịa ịzụta ngwaahịa gị, ị belatala esemokwu nke usoro ịzụ ahịa. Purchazụta ihe na-agụghị agụụ ekwesịghị iwe karịa clicks atọ.
Ọ bụrụ na ị naghị ere ahịa ngwaahịa gị nke ọma na mgbasa ozi mmekọrịta, na-eji Marketing Influencer ma ọ bụ na-eji ngwa niile na usoro ndị dị ugbu a na ọnọdụ na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịga nke ọma. Ọ ga-enye aka ma ọ bụrụ na ị gbadata ya ozugbo enwere ike. Mgbasa mgbasa ozi mgbasa ozi dị ka Instagram bụ ụzọ ọtụtụ mmadụ si enweta foto buru ibu nke ịntanetị, ọ dịkwa gị ijide n'aka na windo ndị ahụ kwekọrọ na ọwa ahịa gị.
Mara ihe ha choro tupu ha eme
Amụma amụma ejiriwo ihe karịrị afọ iri, mana nnabata ya (ọkachasị n'etiti obere ndị na-ere ahịa) adịkarịghị ala, ikekwe n'ihi mgbagwoju anya na ọnụ ahịa ya. Agbanyeghị, site na ijikọ Big Data na mmụba dị ugbu a n'ịzụ ahịa n'ịntanetị, yana azịza ndị dị ọnụ ala ugbu a dị na nyiwe dị iche iche, ọ na-aghọ ihe ngwọta dị ọnụ ala.
Nkọwapụta amụma na-enyere ndị na-ere ahịa aka:
Buo ihe ndị ahịa nwere ike ịzụta
Kpebie ego kachasị elu onye ahịa ga-akwụ maka ngwaahịa
Melite ọkọnọ management
Melite ọgụgụ isi azụmahịa
Mee ezigbo ndumodu banyere ịzụrụ ihe na nkwalite
Jiri njikwa ọnụahịa ka mma
Belata igwu wayo
Ochicho nke ohuru ohuru a na ịdabere na data a pụrụ ịdabere na ya na nke a na-atụ anya ugbu a enweghị ike ịkọwapụta. O nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu na ojiji ọ bụla nke amụma amụma dị mkpa maka azụmaahịa gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Ọnọdụ ọhụrụ na e-azụmahịa
Olee otú ka mma web loading ọsọ
Nnukwu data na e-commerce